Kidnapping Annie sy Arnaud : Olona 15 voaheloka hanao asa an-terivozona mandra-pahafaty -
AccueilRaharaham-pirenenaKidnapping Annie sy Arnaud : Olona 15 voaheloka hanao asa an-terivozona mandra-pahafaty
Kidnapping Annie sy Arnaud : Olona 15 voaheloka hanao asa an-terivozona mandra-pahafaty
28/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Taorian’ny telo andro nandehanan’ny fitsarana, ny raharaha kidnapping an’i Annie sy Arnaud , dia nivoaka io omaly io ny didy, ka fantatra fa ny 15 tamin’ireo 75 voampanga, dia voaheloka hanao asa an-terivozona mandra-pahafaty . Mbola nisy olona iray hafa, izay maha-16 azy ireo kosa dia voaheloka hiasa an-terivozona mandritra ny dimy taona. Afaka madiodio noho ny fisalasalana kosa ireo ambiny. Miampy fandoavana onitra 03 miliara Ariary any amin’ireo mpitory io sazy io, ka ny 02 miliara Ariary amin’izany dia ho an’ny ray aman-drenin’i Annie, ary ny 01 miliara Ariary ambiny, dia natokana ho an’i Arnaud. Tafiditra ao anatin’ireo voaheloka hanao asa na-terivozona mandra-pahafaty ireo,I Stephanie Roger Lala, ilay vehivavy ikoizana ary voarohirohy tamin’ny raharaha fakana an-keriny nisesisesy teto an-toerana. Isan’ireo ihany koa i Ravola, i Marcelin ary Fredy, izay tena lohandohan’ny mpisorona tamin’ny fanatanterahana ity asa ratsy tany Toamasina ity. Satria moa mbola tsy hita popoka izay toerana misy ireo jiolahy telolahy raindahiny ireo amin’izao fotoana izao, dia miampy didy fampisamborana ihany koa izany.
Nilaza ho mbola tsy afa-po tamin’ity didy navoakan’ny fitsarana ity ny dadan’i Annie sy ny dadan’i Arnaud . Ny antony, dia tsy anisan’ireo voakasika tamin’ireo sazy ireo, ary nohafahan’ny fitsarana madiodio, ny tompon’ilay trano, tany Andranomadio Toamasina, izay nametrahana azy dahy ireo, sy nahitana an’i Arnaud farany. Toraka izay ihany koa ny tompon’ilay fiara 4×4 nampiasaina tamin’ny fanatanterahana ity asa ratsy, izay sokajiana ho isan’ny goavana ity. Raha tsiahivina tokoa, dia nanomboka ny alatsinainy lasa teo no nifandahatra teo anatrehan’ny mpitsara izy 75 voampanga ireo, ary tsy vita izany raha tsy omaly. Tsy tonga nanatrika io fotoam-pitsarana io hatrany am-boalohany kosa ireo ilay mpitsara, tany Toamasina izay isan’ny voarohirohy tamin’ity asa ratsy niseho tamin’ny volana novambra 2014 ity. Raha ny fantatra sy ny voalaza, dia natsahatra ny fanenjehana azy, rehefa nandalo teo amin’ny fitsarana tampony. Nahagaga ary mampametra-panontaniana ny rehetra hatreto ny nahatafavoahan’i Marcelin sy Ravola, ity farany izay nitaky onitra tany amin’ny ray aman-drenin’izy dahy ireto, tamin’ny fotoana nisehoan’io raharaha kidnapping tamin’ny telo taona lasa io. Tany amin’ny fonjan’Ambatolampy no nampidirina ireto jiolahy efa tena ikoizana ireto, saingy tsy hita teny an-toerana intsony izy ireo tamin’iny herinandro lasa iny.
“Paradisa sosialista”, “ento miakatra ity firenena ity”, “minoa fotsiny ihany”, “fanovàna”, sns. Efa nahita baikom-pitolomana politika (slogans démagogiques) karazany maro vahoaka Malagasy. Nianjera ny amiraly Didier Ratsiraka ny taona 1991, niakatra teo amin’ny fitondrana ny ...Tohiny
Ravalomanana Marc : Manasa tanana amin’izay hitranga
Ambohimanarina : Norobain’ny mpanao fihetsiketsehana ny vary ho an’ny daholobe